Indlu ekumhlaba osikelwe izindlu yonke sinombuki zindwendwe onguGraeme
Indawo yokuhlala ekhululekile, epholileyo eHatepe eLake Taupo. Isicwangciso esivulekileyo sokuhlala / sokutyela / indawo yekhitshi eneendawo ezinkulu zeveranda ngasemva nangaphambili. Ikhitshi langoku elinezixhobo ngokupheleleyo. Indawo yokuhlala egqunywe kakuhle eyakhiwe kwizinto ezisisigxina. Indawo entle enelanga, ikhusi kunye necandelo labucala kwindawo esetyholweni kufutshane nechibi. Yahlula-hlula 'indlu yeentlanzi' ukulungiselela ukusetyenzwa kweentlanzi.
Hamba uye elunxwemeni, i-150 yeemitha (akukho zindlela zokuwela) okanye i-200 yeemitha ukuya ekulobeni kuMlambo waseHinemaia. Inkundla yethenisi 80 yeemitha. I-Taupo imizuzu eyi-15, i-skiing kwi-Whakapapa imizuzu engama-60
I-Hatepe yindawo yokuhlala ye-100 yezindlu zeeholide ezingahlaliyo ixesha elininzi. Ikwindawo yamatyholo kunxweme lweLake Taupo enezinto ezininzi zeentaka ezisecaleni koMlambo iHinemaia. Yindawo enoxolo nezolileyo- ayilungelanga ukwenza itheko nokwenza ingxolo eninzi.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Hatepe